eriri Optic Patch Cord
Njikọ fiber optic
Njikọ mmiri na-adịghị
Ihe ntụgharị ngwa anya SFP
Igbe nkwụsị eriri
Ihe mmechi fiber optic
Fiber optic eriri
Ihe ngwọta FTTH
Ngwa ngwa Fiber
Igwe eriri ime ime/èzí
UK ga-ewupụta Fibe Optical zuru oke…
UK ga-ewulite ụlọ ọrụ nde 7 zuru oke ka ọ na-erule njedebe nke 2027, dịka akụkọ sitere na webụsaịtị Telecoms…
Ozi nke Telecom nke India: 5G Spectrum…
Ministri nke Telecom nke India: 5G Spectrum Auction na-atụ anya na ọ ga-eme na Mee A na-atụ anya ka ọrịre ahịa 5G spectrum echere na ọ ga-eme…
Ngwaahịa / Ụlọ ọrụ mmepụta ihe
1×5 PLC Splitter Obere ígwè Tube Ụdị...
1×6 PLC Splitter Obere ígwè Tube Ụdị...
1×128 PLC Splitter LC APC ABS Igbe Op ...
MPO-MT 12-isi Multi-mode 10G OM3 Ribbon ...
Akụkọ ihe mere eme nke Shenzhen Optico Communication Co., Ltd.
Na 12 afọ nke ụlọ ọrụ ahụmahụ, Shenzhen Optico Communication Co., Ltd bụ a na-eduga emeputa nke eriri optic components na ọkachamara na-eweta nke FTTH na FTTA ngwọta.
Ihe onwunwe anyị gụnyere ahịrị mmepụta atọ (abụọ na Shenzhen na otu na Ninghai) na otu ụlọ ọrụ nyocha nke US, yana ndị ọrụ 300 a zụrụ nke ọma, (gụnyere ndị ọrụ mmepụta, ndị ọrụ nka, ndị injinia ahịa na njikwa), na-agbazinye anyị ikike nke ngwaahịa asọmpi. na teknụzụ kacha ọhụrụ
Nleba anya ndị ahịa
Iwulite uto anyị site na mmekọrịta chiri anya yana mmekọrịta na-adịte aka na ndị ahịa anyị.
A na-anwale modul optic ọ bụla na ụlọ nyocha Optico, 100% dakọtara na ndị na-ere ahịa niile n'ahịa.
Nlekọta na-adịgide adịgide
Lekwasị anya na uto na gbalịsie ike inweta uru na-adigide nke na-echekwa ọdịnihu anyị.
Ụkpụrụ njikwa ogo ndị a nke International Organisation of Standardization (ISO) na-edobe, na-enye ọtụtụ usoro azụmahịa chọrọ maka nrụpụta ngwaahịa na nnyefe na-agbanwe agbanwe iji zute atụmanya ndị ahịa.
FCC bụ akara asambodo etinyere n'ọrụ na ngwaahịa eletrọnịkị arụpụtara ma ọ bụ rere na United States, nke na-egosi na nnyonye anya elektrọnik sitere na ngwaọrụ ahụ nọ n'okpuru oke nke Federal Communications Commission kwadoro.Ngwaahịa OPTICO kwekọrọ n'ụzọ zuru ezu na FCC, nke na-achọ ijikwa ebili mmiri redio na oghere ndọta karịa nke ọma.
Ihe nrịbama CE bụ iwu European amanyere iwu maka ụfọdụ ngwaahịa dị iche iche iji gosipụta nkwekọ n'ihe achọrọ ahụike na nchekwa dị mkpa edepụtara na ntuziaka European.A na-emepụta ngwaahịa OPTICO n'okpuru ihe CE chọrọ iji gosipụta nkwekọ na ahụike na nchekwa dị mkpa.
CPR, nke a makwaara dị ka Iwu Ngwaahịa Iwu.Iwu a na-ekwu na ngwaahịa niile a na-ere ma ọ bụ ree na Europe ga-enwerịrị akara CE, mgbe ọkọlọtọ kwekọrọ na ngwaahịa a.Akara CE na-egosi na ngwaahịa na-agbaso ụkpụrụ.Ọ pụtaghị na ngwaahịa ga-adabara maka njedebe njedebe niile, mana ọ na-egosi na ngwaahịa ahụ dabara na nkwupụta arụmọrụ ya (DoP), dịka onye nrụpụta mere.
© Nwebiisinka 20102019 : Ikike niile echekwabara. Usoro ojiji na amụma nzuzo
© Nwebiisinka - 2010-2019 : Ikike niile echekwabara.Tags, Ngwaahịa egosipụtara, map saịtị, Saịtị mkpanaka
Ihe ntụgharị ngwa anya SFP, Ihe ntụgharị XFP, 100G SFP transceiver, 10G SFP transceiver, 1.25G SFP transceiver, MTP MPO, Ngwaahịa niile